Eyona ndawo iphambili yePVC yeKholamu kunye noMzi mveliso weMveliso yePipe eIndiya
Owona mgangatho uphezulu uPVC
Iikholamu zeMibhobho yoMvelisi Iipesenti ezili-100 ezingenamhlwa uPVC ikholamu yemibhobho enePower Lock yokwakha imithombo yamanzi efanelekileyo Jonga uluhlu
Khuphela ikhathalogu uPVC iHDPE Umbhobho
kumvelisi Ukuphuculwa kwempucuko kunye nomzi mveliso ngokubanzi kuhlala kubonakala kunomdla ekutshatyalalisweni kwamahlathi kangangokuba yonke into eyenziweyo ngolondolozo kunye nemveliso ayibalulekanga kwaphela xa ithelekiswa. Jonga uluhlu Khuphela ikhathalogu
Ngaba ujonge uPVC Column & PVC Casing Pipe?
Inkampani yokuvelisa imibhobho ye-uPVC
Ukuba sisikhokelo esiphambili kulawulo lwamanzi lwe-ISO 9001, uphawu lokuvelisa umbhobho oluvela eIndiya, thina kwiVinyl Tubes, sizikhathalele zonke iimfuno zakho zolawulo lwamanzi. Sinikezela ngeyona mivuzo iphezulu kuluhlu lwePCU, iiCasing kunye neMibhobho yeScreen, imibhobho yePiezometric, imibhobho yoxinzelelo, imibhobho ye-SWR, imibhobho yokuhambisa amanzi kunye nemibhobho yemibhobho yemfuno zakho zolawulo lwamanzi. Sinikezela ngezona zisombululo zibalaseleyo kubathengi bethu ngezinto ezintsha eziqhubekayo, ubuchule obugqithisileyo, iinkqubo ezahlukeneyo, kunye neemveliso ezisemgangathweni.
Ukufumana isikhundla sobunkokeli ngokubonelela ngesisombululo esineendleko kumbhobho wamanzi, ukuqinisekisa ukoneliseka kwabathengi ngokunikela kwimpumelelo yabo.
Inkokeli kwihlabathi liphela kumbhobho wamanzi Ukuvela njengenkokeli kwihlabathi kushishino lombhobho wamanzi ngophuhliso nokwamkelwa kwetekhnoloji entsha kunye nenkqubo engagungqiyo yokuguqula izimvo ezintsha zibe yinyani engaqhelekanga.
Ukwenza ukuba lonke unikezelo lwamanzi luquleke kakuhle kwihlabathi liphela ngokusebenza ngokukuko kunye nenqanaba elifanelekileyo lokhuseleko ngelixa ligcina ukufikeleleka ngalo lonke ixesha. Ke, sijonge phambili ekongeni iiyunithi ezi-1.3 zezigidi zombane ngemizamo yethu.
Iimveliso zePVC esiZisayo
Iingcali zoLawulo lwaManzi
uPVC Ikholamu yePayipi
Owona mgangatho uphezulu wePVC weeKholamu zemibhobho umenzi 100% wemibhobho engenamhlwa uPVC ikholamu yemibhobho ngeSitshixo saMandla ekwakheni amaqula amanzi eKhaya Iinkonzo Zethu uPVC…
Umbhobho wePVC weCasing
Umbhobho woxinzelelo lwePVC
Imibhobho yoxinzelelo lwe-uPVC ibonelelwe ngesokethi ecacileyo kwaye ilungele ukudityaniswa kwesamente kunye neBell kwisicelo. Owona usetyenziswayo kwimibhobho yoxinzelelo lwe-uPVC kwezolimo, ukuhambisa amanzi, ukunkcenkceshela ngedriphu, imigca yokuchela, njlnjl.
Ukusetyenziswa kombhobho wePVC
Unkcenkceshelo / uLimo
Umbane / Unxibelelwano
Imibhobho IVINYL yakhe wonke umntu
Siyi-brand yolawulo lwamanzi eqinisekisiweyo ye-ISO 9001
Umgangatho oqinisekileyo. Imeko yokuveliswa kobugcisa kunye ne-ISO, i-NSF, i-WRAS, i-ASNZ, i-CE-eqinisekisiweyo ye-EUROGLOBAL.
Ubungqina beepayipi zeVINYL
Ubungqina obu-100% bokuvuza
Ukuxubana umphezulu ongaphantsi
Ubuninzi bokulayisha umthwalo
“I-SCG iyaqhubeka nokubonelela ngenkonzo ebalaseleyo kunye nobuchule obugqwesileyo bobuchwephesha kwiiprojekthi ezahlukeneyo ukusuka kumncinci ukuya kwindawo enkulu. Okona kubalulekileyo kukuba i-SCG izabalazela ukuqonda iinjongo zeprojekthi iyonke kunye nokubonelela ngezisombululo ezisebenzayo nezisebenzayo. Ukuzinikela kwabo ekunikezeleni ngeenkonzo ezizodwa kubonakala kuwo wonke umsebenzi abawenzayo. "
"Ngaphezulu kweminyaka eli-10 besebenza namaShishini e-SCG kwiindawo ezingcolisekileyo kokusingqongileyo baye babonisa ngokuqhubekayo ubuchule obugqwesileyo bobuchwephesha ngelixa beqinisekisa inkonzo yabathengi ephezulu. Indlela yabo yokusebenzisana kunye nexesha lokwenyani lokuziqhelanisa neemeko eziguqukayo kube negalelo kwimpumelelo yeenjongo ezininzi zeprojekthi. "
Ngelixesha ndisebenze neSCG kule projekthi, ndifumanise ukuba uMike Campbell kunye neqela lakhe banolwazi oluninzi kwaye baqhuba ngeziphumo. Ngokusekwe kuvavanyo lokuqala lokulinga kunye nokuqonda okunamandla kwesiseko. iimeko, ngakumbi iimeko ezaphukileyo zelitye. Umsebenzi wabo kule projekthi. "
Ukudala ikamva lamanzi
Yintoni eqhubekayo kwibhlog yethu?
Nxibelelana neofisi yethu ngesicatshulwa sasimahla! Kuhlala kulungile ukuba nombono ombi kuhlahlo-lwabiwo mali
kweli nqanaba ukuze sikwazi ukucaphula xa kufanelekile
Izizathu ezi-5 zokuba kutheni kufuneka usebenzise imibhobho yePVC yeeProjekthi zaManzi
Ukunyuka ngokukhawuleza kokudodobala kweenkqubo zamanzi kunye nogutyulo ngenxa yomhlwa, ukuvuza, kunye nokophuka kwezinto zombhobho zentsimbi zisenza sibe namandla okubonelela ngokucocekileyo kunye…
Ngaba ukubhola kakuhle kunenzuzo? - Imibhobho yeVinyl
“Imakethi ihlala itshintsha, kwaye ingcebiso enkulu kukumamela apho intengiso iya khona kwaye ulungelelanise izixhobo zakho, ishishini, iwebhusayithi ukuze ilingane…
Imiceli mngeni yaseRussia yaseRussia- Jonga nzulu
Imigangatho yoMgangatho kunye neMozulu embi kunye neMeko zaseKhaya zitshintsha i-JA Trudeau iye eYartruba Vinyl Imibhobho iphehlelela imibhobho yayo yeekholamu eRashiya nakwingingqi yeCIS…
Imibhobho emi-7 ephezulu yePVC yeeKholamu oyaziyo- Imibhobho yeVinyl
Iiprojekthi zolawulo lwamanzi zisebenzisa iimpompo ezingena emanzini zixhomekeke kakhulu kwimibhobho yekholamu yokukhupha amanzi equleni ngokufanelekileyo. Kananjalo, uqinisekisa umgangatho ophezulu…
Umthengisi wempompo kunye nemibhobho kufuneka afunde - Imibhobho yeVinyl
Ukuba uyi-Borewell Driller okanye umboneleli wempompo kunye nemibhobho kwaye usasebenzisa imibhobho yentsimbi ke le bhlog yeyakho. Kufuneke u…